ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid; 3-Amino- Molecular Formula: C3H4N4O2 မော်လီကျူးအလေးချိန် - 128.09.09 CAS: 3641-13-2 ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖော်မြူလာ - အသုံးပြုမှု - ဆေးဝါး၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဆိုးဆေး intermediates.For ဥပမာ, ribavirin အညွှန်းကိန်းအမည်အညွှန်းကိန်း Value ကိုအသွင်အပြင်အဖြူရောင်သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲအမှုန့်ပါဝင်မှု %98% ရေ≤0.3% MP 178-184 we ယခုကြှနျုပျတို့မြင့်မားတီထွင် devices များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများသည်ယူအက်စ်၊ ယူကေနှင့်အခြားနိုင်ငံများသို့တင်ပို့သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 3-Amino-1,2,4-Triazole Aminotriazole; ပေါင်းသတ်ဆေး 3-Amino-1H-1,2,4-Triazole; CAS: 61-82-5 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C2H4N4 မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၈၄.၀၈ တည်ငြိမ်မှု - တည်ငြိမ်သော၊ လိုက်ဖက်သောပေါင်းစပ်မှု၊ ကြေးနီ၊ အလူမီနီယံ၊ အက်ဆစ်၊ အယ်ကာလိုင်း၊ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ Crystalline အစိုင်အခဲ။ ၎င်းသည်ရေ၊ မက်သနော၊ အီသနောနှင့်ကလိုရိုဖိုတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ...
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole 3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol; 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol; ATSA CAS: 16691-43-3 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C2H4N4S မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၁၁၆.၁၄ အသွင်အပြင်နှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ - မီးခိုးရောင်အဖြူရောင်အမှုန့်သိပ်သည်းမှု: ၂.၀၉ ဂရမ် / စင်တီမီတာအရည်ပျော်မှတ်:> ၃၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (လီတာ) Flash point: 75.5 ° C နှုန်း: 1.996 Steam ဖိအား - ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၀.၃၁၂mmhg ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖော်မြူလာ - အသုံးပြုမှု - ဆေးဝါးနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများအလယ်အလတ်အနေဖြင့်၎င်းကိုဘောပင်ဘောပင်မှင်၊ ချောဆီနှင့်ပုရွက်ဆိတ်၏ပေါင်းစပ်မှုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမည် Aminoguanidine Carbonate; Aminoguanidine ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကာဗွန်နိတ် CAS: 2582-30-1 မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၁၃၆.၁၁ အရည်ပျော်မှတ် ：: ၁၆၆ ဒီဂရီမော်လီကျူးဖော်မြူလာ - CH6N4H2CO3 ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖော်မြူလာ - အသုံးပြုမှုများ - အဓိကအားဖြင့် ၃ - အမိုင်နို - ၅ - ကာဗို - ၁၂.၄-triazole အတွက်ပြင်ဆင်သည့်စက်မှုဆိုးဆေးများအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ နှင့် cation အနီရောင် 2BL, ဒြပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက် X-GRL ပေါင်းစပ် Trapidil, propionamidine hydrazone; ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ဆူညံသော furosemide ene hydrazone စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ အရောင်ရုပ်ရှင် ...
ထုတ်ကုန်အမည်: carbazamidine hydrochloride; (diaminomethylidene) hydrazinium chloride မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - CH6N4HCL CAS： ၁၉၃၇ - ၁၉ - ၅ မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၁၁၀.၅၅ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖော်မြူလာ - အသုံးပြုမှု - ဆေးဝါး၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာဆေးဝါးများအညွှန်းကိန်းအညွှန်းတန်ဖိုးတန်ဖိုးပုံပန်းသဏ္crystာန်ပုံဆောင်ခဲအမှုန့်≥98% ≥99% ပျော်ဝင်ပစ္စည်းများ။ .20.2% .10.1% ခြောက်သွေ့မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှု≤1.5% ≤1% စက်နှိုးခြင်းကျန်≤0.2% .10.1% သံပါ ၀ င်မှု (Fe) 10 ppm6ppm အခမဲ့အက်ဆစ် .80.8% ≤0.5% ...
ထုတ်ကုန်အမည်: aminoguanidinium sulphat မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C2H14N8SO4 CAS: 966-19-0 အရည်ပျော်မှတ် - ၂၀၆ ဒီဂရီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖော်မြူလာ - အသုံးပြုမှု - ဆေးဝါး၊ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း၊ ပေါက်ကွဲစေနိုင်သောဒြပ်နည်း - (၁) ၎င်းကို hydrazine sulfate နှင့်ထုံးနိုက်ထရိုဂျင်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုဖြင့်ရရှိသည်။ ဆားကိုဖွဲ့စည်းရန် sulfuric acid နှင့်ဓါတ်ပြုပြီးနောက်ပထမ ဦး ဆုံးရေထဲ၌ hydrazine sulfate ကိုဆိုင်းငံ့ပါ၊ အအေးနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအောက်တွင်ထုံးနိုက်ထရိုဂျင်ကိုထည့်ပါ၊ အပူချိန် ၂၀ at ခန့်တွင်ထိန်းချုပ်ပါ၊
synonyms: Aminoguanidinium နိုက်ထရိတ်; Aminoguanidine နိုက်ထရိတ်မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - CH6N4.HNO3 ဖော်မြူလာအလေးချိန် - ၁၃၇.၀၉ CAS - ၁၀၃၀၈-၈၈ - ၄ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် - ၁၀၃၀၈-၈၈ - ၄ - အရည်ပျော်မှတ် - ၁၄၅ - ၁၄ - ၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် - ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံသေနည်း - အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ပါဝင်မှု≥ 99% ပျော်ဝင်≤ 1% အစိုဓာတ်≤ ၁% လောင်ကျွမ်းခြင်းမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ≤ ၀.၃% သံ ၁၀ppm ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီပေးသူအယ်ဒီတာပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီ - ရှူရှိုက်မိပါကရှူသွင်းမိပါကလူနာအားလတ်ဆတ်သောလေထဲသို့ရွှေ့ပြောင်းပါ။ အရေပြားနှင့်ထိတွေ့ခြင်း - ညစ်ညမ်းသောအဝတ်အစားများကိုချွတ်။ အရေပြားကိုဆေးကြောပါ။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 4-Hydroxybenzaldehyde p-Hydroxybenzaldehyde; PHBA၊ CAS အမှတ်: 123-08-0 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C7H6O2 မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၁၂၂.၁၂၁၃ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖော်မြူလာ - သိပ်သည်းဆ - ၁.၂၂၆ ဂ / စင်တီမီတာ - အသုံးပြုမှု။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသောဓာတုထုတ်ကုန်နှင့်အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ်မှုအတွက်အလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။ electroplating နှင့်အရည်ကြည်လင်စက်မှုလုပ်ငန်းများ။ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သောပိုးသတ်နိုင်သည့်ဓာတ်ခွဲခန်းဖြစ်သည့် sulfonamides ၏အလယ်အလတ်အဆင့်ကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Guanidine Hydrochloride Aminoformamidine hydrochloride သို့မဟုတ် Guanidinium chloride အသွင်အပြင် - အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်အဖု။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက်များ ၁။ စရိုက်လက္ခဏာ - အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်စိမ်း ၂။ အရည်ပျော်မှတ် (℃) - ၁၈၁-၁၈၃ ၃။ နှိုင်းယှဉ်သိပ်သည်းဆ (g / ml, 20/4 ℃): 1.354 4. ပျော်ဝင်နိုင်မှု: 100g ရေတွင် 228g, ၁၀၀ ဂတွင် ၇၆ ဂ 20 at မှာ 100g အီသနောအတွက် Methanol နှင့် 24g ။ အက်တွန်၊ ဘင်ဇင်နှင့်အီတွင်ပျော်ဝင်လုနီးပါးဖြစ်နိုင်သည်။ 5. PH တန်ဖိုး (4% aqueous solution, 25 ℃): 6.4 ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်တည်ငြိမ်မှုဒီထုတ်ကုန်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပါတယ် ...